तिथि मेरो पत्रु »7एक तिथि लागि पूर्ण रूपमा अद्वितीय विचार
द्वारा जुली रिची
7 एक तिथि लागि पूर्ण रूपमा अद्वितीय विचार
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 20 2020 |3मिनेट पढ्न
डेटिङ, हामी सबै केही राम्रो मिति अनुभव गरेका छन्, केही सुस्त / dreary व्यक्तिहरूलाई, केही भयानक cringe योग्य व्यक्तिहरूलाई र पनि आषा केहि शानदार / रोमाञ्चकारी व्यक्तिहरूलाई. त्यसैले के एक मिति अचम्मको बनाउँछ? पक्कै तिमी बैठक छन् व्यक्ति को यो संग गर्न धेरै छ, तर म यो गर्न अझ त्यो भन्दा बढी छ विचार. म साँच्चै एक मिति बाहिर खडा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा साझा छ विचार अनुभव सँगै छ, र जडान यस ल्याउँछ.
एक पहिलो तारीख लागि एक पल्ट वा पब मा बैठक धेरै Cliche छ र भोजन राम्रो हुँदासम्म, तपाईं आफ्नो जोडीसित मिति रात लागि हरेक हप्ता यो के गर्दा यो पट्यारलाग्दो प्राप्त गर्न सक्छन्. यो एक पहिलो तारीख वा नियमित साप्ताहिक 'मिति रात' छ कि छैन भनेर साँच्चै मा केहि मजा र हात गर्न रोजाइका यसलाई मसला.
साझा अनुभव मान्छे बीच सम्बन्ध बनाउन भनेर थाहा? यो जस्तै काम गर्दछ. तपाईं अनुभव को कुनै पनि प्रकार छ जब तपाईं पनि यो संग जान भनेर भावनाहरू हुनेछ. उदाहरणका लागि तपाईं एक चट्टान बन्द abseil भने तपाईं शायद केहि अलि-अलि डराउनु अनुभव हुनेछ, सायद आतंक, एड्रेनालाईन र एक उच्च. अब हामी अर्को व्यक्ति संग एक साझा अनुभव छ जब, र हामी सँगै यस्तै भावनाहरू माध्यम ले जाँदैछन्, यस बन्धन सिर्जना. एउटा कुरा हामी आपसमा सम्बन्धित र कुरा गर्न केहि गर्न सक्छन्, तथापि महिलाहरु संग अधिक मूर्त कारण छ. महिला एक साझा जब (राम्रो वा रोमाञ्चक) कसैले भनिने रासायनिक संग अनुभव ओक्सीटसिन वास्तवमा हामीले शरीर मा जारी लिन्छ. यो सम्बन्ध हर्मोन छ र हामी संग अनुभव भएको हो व्यक्ति नजिक महसुस गर्नेछन्. अब दम्पतीले रोमाञ्चकारी कुरा गर्दै केही एड्रेनालाईन कि, र केहि मजा गर्दै केही endorphins र serotonin, र यो एक राम्रो मादक मिश्रण हो. तपाईं यसलाई देखो जब यो सजिलो छ यो बाटो हामी केटासित कसैले लागि गिर कसरी हेर्न.
त्यसैले हामी डेटिङ को अवधारणा यो कसरी लागू गर्न सक्छन्? सजिलो, तपाईं साझा अनुभव सिर्जना र एक रोमाञ्चक अनि रमाइलो तत्व समावेश भनेर मिति योजना चाहनुहुन्छ. राम्रो खबर सामान्य छ, नजर-सर्वोत्तम प्रतिमूर्तियाँ मोडेल छैनन् जो दैनिक मान्छे अझै पनि अनुभव यी प्रकारको सिर्जना गर्न सक्छ. अनि यो तपाईं आफ्नो प्रतियोगिहरु मा एक किनारा दिन्छ. अनुभव को यस प्रकारको सिर्जना गर्न सक्षम हुन कसरी शक्तिशाली र आकर्षक, र के एक ठूलो बाटो आकर्षण माथि र्याम्प गर्न. हामी अर्को व्यक्ति संग बढ भावना र सम्बन्ध महसुस गर्दा हामी तिनीहरूलाई आकर्षित महसुस.
आफ्नो तिथि को लागि अद्वितीय केहि र मजा छान्ने को अन्य लाभ यो बरफ भंग गर्नेछ भन्ने छ, यो एक पहिलो तारीख छ भने जो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ. सँगै एक पिज्जा खाना बनाउन बाहिर काम गर्दै जब तपाईं अप्ठ्यारो महसुस लागि धेरै समय छैन. अनि यो एक अर्को संग शारीरिक र खिलवाड को आदी रही लागि अवसर दिन सक्छौं. यो एक पल्ट मा जब एक तिथि मा तपाईं शायद थाहा कसैले छुन अक्सर कडा छ, सँगै व्यावहारिक कुरा गरिरहेका छन् तर जब यो धेरै सजिलो छ. तपाईं गतिविधि सँगै काम गर्न छ भने पनि राम्रो छ, साझा अनुभव जडान सिर्जना कि सम्झना. अनि आफ्नो गतिविधि मजा छ र तिमीहरू आराम गर्न दुवै मदत गर्नेछ यस हाँसिरहेका पाउन भने.
यहाँ तपाईं को लागि केहि सुझाव:
सँगै पाक - सँगै पाक धेरै मजा हुन सक्छ. तपाईं या त एक खाना पकाउन पाठ बुक वा घर मा केहि बनाउन सक्छ (यो एक पहिलो तारीख छैन अड्कल काट्ने).
माटाका भाँडा - फेरि यो विकल्प एक हातमा छ र धेरै सेक्सी हुन सक्छ. चलचित्र 'भूत' को विचार. अनि ठूलो भाग तपाईं गरे जो को रूप मा मिति देखि एक उपहार हुनेछ भनेर छ. बस पक्का आफ्नो मिति पुराना लुगा लगाउने गर्न थाह बनाउन.
नाटकीय दृश्यहरु संग एक पैदल - हामी एक साझा अनुभव बनाउन बताउनुहुन्थ्यो र तपाईं धेरै समय छैन या तपाईं एक बजेट मा हो भने सँगै एक पैदल आदर्श हुन सक्छ. तिनीहरूले हिंडिरहेका छौं जब मानिसहरू अक्सर सजिलो आराम र कुरा गर्न पाउन. तपाईं राम्रो दृश्यहरु कहीं चयन भने यो अनुभव गर्न थप्न सक्नुहुन्छ. म कहिल्यै थियो सबै भन्दा राम्रो मिति को एक एक जंगलमा जंगली च्याउ टिप्न थियो. सौभाग्य म डेटिङ थियो मानिस व्यक्तिहरूलाई खाद्य थिए जो थाह!
Abseiling वा zorbing जस्तै साहसी केहि - एड्रेनालाईन दीवाने लागि यो सिद्ध छ. बस आफ्नो मिति योजना छन् के थाह छ र तपाईं जान अघि यो लागि सुनिश्चित!
चिडियाघर जानुहोस् - जनावर संग केहि पनि ठूलो छ. जनावरहरूको Petting आफ्नो गरम र प्रत्येक अन्य petting लागि मूड मा प्राप्त गर्न सक्छन्. प्लस यो सबै महत्त्वपूर्ण हर्मोन ओक्सीटसिन जारी गर्न मदत गर्छ.
घोडा चढ्ने - घोडा चढ्ने साँच्चै एक हंसी हुन सक्छ, र पनि एक चुनौती तपाईं अघि यो प्रयास छैन भने. फेरि तपाईँले रूपमा जान अघि आफ्नो साथी चुनौती लागि छ जाँच सबै को लागि छैन.
कला प्रदर्शनी - यदि तपाईं दुवै जस्तै कला यो एक सुसंस्कृत र शानदार साझा अनुभव लागि गर्न सक्छन्. फोटो प्रदर्शनका पनि रमाइलो हुन सक्छ.
अनलाइन डेटिङ तपाईं को लागि एक राम्रो विकल्प हो?
13 एक यादगार अनुभव को लागी जाडो मिति विचारहरु
एक चुम्बन अर्थ
तपाईं साँच्चै ठेगाना गर्ने आवश्यकता के: शिष्टता राजा छ
7 कुरूप गल्तीबाट महिला त्यो खण्डहर एक वैवाहिक कुनै पनि संभावना बनाउन